बिष्णु बरालको माइतीले लग्यो सबै दाइजो फिर्ता ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 4, 2021 AdminLeaveaComment on बिष्णु बरालको माइतीले लग्यो सबै दाइजो फिर्ता ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
माईती पक्षबाट बिहेको सम्पुर्ण ब्यबस्थापन बेहुली आफैले गरेकी थिईन् । बिहे भएको २७ दिनमा जेष्ठको १४ गते बिष्णु मृ’त फेला परिन् । मृ’तककी आमा अझै पनि छोरीले आ.त्मह.त्या गरेको हो भनेर पत्याउन सकेकी छैनन । मागी विवाह गरेकी उनको २७ दिन मै मृ’त्युको खबरले उनकी आमा अझै विछिप्त छिन ।
छोरीको रहस्यमय मृ’त्यु भएपछि विष्णुको माइती पक्षले सबै दाइजो फिर्ता लगेका छन । त्यस्तै केटा पक्षले दिएको सबै गहनाहरु पनि फिर्ता गरेका छन । दाइजो फिर्ता लिने क्रममा निक्कै भावुक बनेका बिष्णुका दिदीले बहिनि फिर्ता लानु पर्नेमा दाइजो फिर्ता लादा निक्कै दुख लागेको बताइन ।